Mazuva eGerman, Mwedzi yeGerman uye Mwaka weGerman (Vhidhiyo Chidzidzo)
Muchidzidzo ichi, tichafukidza misoro yeGerman Mazuva, eGerman Mwedzi uye Mwaka weGerman. Musoro wedu wakakosha uye haudi chero ruzivo rwegrama. Nekudaro, zvinoda kuve nemusoro zvakanaka uye kudzidza nekukasira. Ndiyo imwe yenyaya dzinozoshandiswa kazhinji muhupenyu hwezuva nezuva.
Muvhuro: Montag (mo: no: g)
Chipiri: Dienstag (di: nsta: g)
Chitatu: Mittwoch (mitvoh)
China: Donnerstag (firiza: g)
Chishanu: Freitag (frayta: g)
Mugovera: Samstag (samsta: g)
Misika: Sonntag (zonta: g)
Tora chiono chevhidhiyo yedu yeGerman nzira pamazuva eGerman, mwedzi yeGerman uye mwaka weGerman.
yakanaka asi hapana mitsara
nguva dzechi German
tarisiro anodaro 4 apfuura
KHALIL anodaro 3 apfuura
Ah, saiti iyi yakanaka kwazvo.
moemocanxnumx anodaro 3 apfuura
Akaona zita rangu.